ဝင်းအောင်ကြီး(မောင်အောင်မွန်) – ဦးတင်ထွဋ်ကသေ လူသတ်သမားက ပေါ်ပေါ်ထင်နေသွားတဲ့ တိုင်းပြည် | MoeMaKa Burmese News & Media
(မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၁၈(မှတ်ချက်။ ။ အားလုံးသေကုန်ကြပြီမို့ ပြန် တင်ရဲတာပါ။ ပုံထဲမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ညာဘက်က သခင်မြ၊ ဘယ်ဘက်က ICS ဦးတင်ထွဋ်ပါ)
2 Responses to ၀င်းအောင်ကြီး(မောင်အောင်မွန်) – ဦးတင်ထွဋ်ကသေ လူသတ်သမားက ပေါ်ပေါ်ထင်နေသွားတဲ့ တိုင်းပြည်
Dr. Maung Maung Gyi on February 4, 2018 at 9:42 pm
ဦးတင်ထွဋ်ကို ဗိုလ်စိန်မှန်က သတ်တယ်။ ဗိုလ်စိန်မှန်လည်း နောက်ပိုင်းမှာ “နှုတ်ပိတ်”နေရအောင် အသတ်ခံရတယ်လို့ လူကြီးသူမများထံက ကြားဖူးပါတယ်။
ကြေးမုံဦးသောင်းရဲ့ “ဗိုလ်နေဝင်းရှုပ်ခဲ့သမျှ” စာအုပ်မှာတော့ ဦးတင်ထွဋ်ကို ဗိုလ်နေဝင်းန်က သတ်ခိုင်းသလိုလို ရေးထားတယ်။
Tommy Sin on February 6, 2018 at 5:26 pm
According to other book,U Tin Htut was killed by Yangon Ba Swe by instruction of U Ne Win. Yangon Ba Swe and other members were who tried to assinate U Saw.Bo Sein Hman was killed by U Nu due to fighting with Sein Hman report at Parlimant. That I heard from other senior peoples.